DayExtremumZones Metatrader5အညွှန်းကိန်း - MT5 Indicator သည်
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 25, 2021
နေအိမ် MT5 Indicator သည် DayExtremumZones Metatrader5အညွှန်းကိန်း
DayExtremumZones Metatrader5အညွှန်းကိန်း
အဆိုပါညွှန်ကိန်းနေ့စဉ် extremum ဇုန်ပြသ. အများဆုံးဇုန်: တစ်နေ့လျှင်အများဆုံးအနေဖြင့်အကွာအဝေး – တစ်ရက်အကွာအဝေး၏Х%, နိမ့်ဆုံးဇုန်: တစ်ရက်နိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်အကွာအဝေး + တစ်ရက်အကွာအဝေး၏ Y ကို%.
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် parameter သည် setting ကိုခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျကြိုက်သလောက် Tune ဇုန်သတ်မှတ်ချက်ဘောင်!
အဆိုပါညွှန်ကိန်းငါးပုံဆွဲစတိုင်များ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီး information ကိုတငျပွနိုငျ:
DayExtremumZones Metatrader5အညွှန်းကိန်းဟာ Metatrader ဖြစ်ပါသည်5(MT5) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
DayExtremumZones Metatrader5အညွှန်းကိန်းအချည်းစည်းမျက်စိမှမမြင်ရတဲ့နေသောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေး.
DayExtremumZones Metatrader install လုပ်နည်း5Indicator.mq5?
ဒေါင်းလုပ် DayExtremumZones Metatrader5Indicator.mq5
Copy ကူး DayExtremumZones Metatrader5သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ Indicator.mq5 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
DayExtremumZones Metatrader ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး5Indicator.mq5
indicator DayExtremumZones Metatrader5Indicator.mq5 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
DayExtremumZones Metatrader ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို5သင့်ရဲ့ Metatrader မှ Indicator.mq55ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးind aMU HTF Metatrader5အညွှန်းကိန်း
Next ကိုဆောင်းပါးချက်ချင်း Trendfilter HTF Metatrader5အညွှန်းကိန်း